Hack Hack: Mikaroha ny bilaogiko amin'ny alàlan'ny Keymarks | Martech Zone
Hack Hack: Mikaroha ny bilaogiko amin'ny fampiasana Keymarks
Talata, Janoary 23, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Matt ao amin'ny The Net Monkey dia nahatonga ahy hieritreritra anio. Izy dia nitady teny mampiasa ny fampiasa Keymarks namboarina tao amin'ny Firefox. Tsy azoko antoka raha efa nampiasa an'ity ianao fa io no zavatra mahafinaritra indrindra hatrizay. Niorina tao amin'ny Firefox ireto manaraka ireto:
dict - Jereo ny rakibolana
google - Fikarohana Google
quote - Fikarohana Google miaraka amin'ny stock: operator
Ny dikan'izany dia afaka mijery teny fotsiny ianao amin'ny fanoratana:
Kitiho ny fidirana ary azonao izany! Mahafinaritra ha? Mbola tsara kokoa aza, azonao atao ny manoratra ny mari-pamantarana manokana anao ao amin'ny Firefox! Ity no fomba:
Mandehana any amin'ny tsoratadidy> Alamino ireo tsoratadidy
Tsindrio havanana amin'ny Fikarohana haingana ary safidio ny Tsoratadidy Vaovao
Tonga ny fifanakalozan-kevitrao ary azonao atao ny mameno azy amin'ny% s ho toy ny kofehin'ny soloanao.
Ka ity ny fomba ahafahanao manangana mari-pamantarana lehibe hikarohana ny bilaoginao manokana amin'ny alàlan'ny WordPress:
Ny hany mila ataoko dia ny karazana:
Ary hisy valin'ny fikarohana ao amin'ny tranokalako ho an'ny "feedburner"!
Misy fomba an-jatony azonao ampiasaina ity… karoka fikarohana, fikarohana technorati, fikarohana Alexa… eritrereto fotsiny ny fahafinaretana mety hanananao!
UPDATE: Ireto misy mari-pamantarana mahafinaritra kokoa hanampy:
Teny lakile: wp
teny lakile: dict
Teny lakile: thes
Teny lakile: sarintany
Teny lakile: js
Google Codesearch ho an'ny Java
Teny lakile: java
Tsy manana izany?
Eto ny WordPress 2.1… Hmmmm
Tanjona ho an'ny 2007